JINHUA KUNYARADZA VEHICLE.CO., LTD ari Company Unogona Vimba uye riri muna Jinhua, Zhejiang Province, China, iyo hwaro zvinangwa zvayo iri manyoro uye simba-rokuponesa chokufambisa uye nokudaro kupa vanhu vane utano hwomutambarakede chokufambisa kunzwa. The kambani dzinowanzotsigi- kugadzira uye kutengesa nekuve e-bikes, mufambo Scooters, dzemagetsi mawiricheya etc.
Kuvakirwa yedu budiriro & kugadzirwa vanokwanisa, yakaoma unhu kudzora maitiro, uye akapfuma zvakaitika kwekurasira kuti mumisika siyana. Tinoziva sei kuti kupa chigadzirwa zvakanaka uye basa rakanaka importers uye Distributors rose. OEM / ODM uye vamwe customization basa iripo. Uye tinogona kupa richikoshawo mazano vatengi matsva kana zvakakodzera.
JINHUA KUNYARADZA VEHICLE.CO., LTD anogara kutsvaka zvitsva mabhizimisi vadyidzani kwese munyika muri. With Certifications pamusoro EN15194, CE, Ul, ROHS iripo kuti iwe kupinza nyore mu Europe kana munzvimbo dzose muri.
JINHUA KUNYARADZA VEHICLE.CO., LTD kugamuchira iwe pamwe zvikuru kushandiswa tsvimbo, zvose pamwe mupfumi ruzivo mumunda dzemagetsi bikes uye mufambo Scooters.